Madaxwayne Farmaajo oo furay Kalfadhiga Aqalka Sare iyo Xiisadda u dhaxaysa Khaliijka oo saamaysay Furitaanka Kalfadhiga. – Hornafrik Media Network
Muqdisho, 12 July: Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa furay kal-fadhiga 2aad ee Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka.
Madaxwaynaha iyo Gud Aqalka Sare.
Madaxaweynaha oo ay dhinacyadda ka taagan yihiin Gudoomiyaha Aqalka Sare iyo Gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa kula dardaarmay labada Gole ee Baarlamaaka Jamhuuriyadda in ay xoojiyaan xiriirkooda, ayna adkeeyaan wada shaqaynta ka dhexeeysa labada gole sida ku cad Qodobka 56aad ee Dastuurka Kumeel Gaarka ah Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya.
Madaxwaynaha oo dhinacyadda ka taagan yihiin Gudoomiyayaasha Aqalka Sare iyo Golaha Shacabka.
Safiiradda Wadamadda Xulufudadda ah ee Turky iyo Qadar ayaa iyaguna ka soo qayb galay Furitaanka Kalfadhiga Aqalka Sare ee Somalia.
Abshir Bukhari oo ay dhinacyadda ka taagan yihiin Safiiradda Qadar iyo Turky
Diblomaasiyiinta Safaaradda Imaaraadka oo lagu casuumay Furitaanka Kalfadhigan ayaa ka baaqsaday iyagoo aan soo bixin wax cudur daar ah. Waxayna Hornafrik ogaatay in Sababta ay uga baaqsadeen ay ahayd. kadib markii ay ka war heleen in Safiiradda Qadar iyo Turky lagu casuumay Shirka.
Somalia ayaa u muuqata inay ku sii dhex milmayso Khilaafka Wadamada Khaliijka.
Xubnaha Aqalka Sare oo dhagaysanaya Khudbadda Madaxwaynaha